UTaylor Swift ngeAlbum yakhe 'Udumo' aluyi kubakho kwiApple Music | Ndisuka mac
Kwakhona impikiswano iyaxhuma kunye nemvumi uTaylor Swift kunye neApple Music, kodwa ngeli xesha iSpotify kunye nezinye iinkonzo zomculo ezisasazekayo ziyabandakanyeka. Kwaye kubonakala ngathi imvumi iphinda ifune ukubalasela kwimithombo yeendaba (eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe yinto entle kuye njengoko beyenzile kumaxesha angaphambili) nakwi Ukukhutshwa kwakhe kwecwecwe elithi "Udumo" oluza kuba nge-10 kaNovemba aluyi kubakho kuyo nayiphi na inkonzo yokusasaza.
Ezi ndaba zivela ngokusesikweni eBloomberg apho abameli beemvumi bachaze loo nto ubuncinci kwiveki yokuqala emva kokukhutshwa kwayo nokanye ziya kufumaneka kwezi nkonzo.
Kubonakala ngathi iqhinga ebelimsebenzele ngaphambili ngolu hlobo lokuqhutywa nguTaylor Swift, kwaye uyaphinda kule albhamu intsha enezingoma ezili-15 ezintsha. Ialbham enesihloko esithi "1989" yimvumi enye sele ifumene into efanayo nale yokwala ukuyinikezela ngokuthe ngqo kwiApple Music nakwiSpotify bekungekho ngo-2015 xa yayimiliselwa kwiApple Music kwaye kulo nyaka ifikelele kwinkonzo yomculo esasazayo Spotify.
Iindaba ezifanayo ziye zabonwa kunye namanye amagcisa anje ngoAdele okanye uBeyonce kungekudala kwaye kunokwenzeka ukuba baya kuqhubeka ukubonwa kwikamva. Ngayiphi na imeko, ayicetyiswa into yokuba iidiski azifikeleli kula maqonga, okuzama ngayo le miqondiso kukuba abasebenzisi bathenga ifomathi ebonakalayo ezivenkileni, nokuba yeyedijithali okanye eyomzimba, kodwa bayathengiswa ngokwasemzimbeni ngaphambi kokufikelela kumaqonga okusasaza. Siza kubona ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukukhupha i-albhamu kwi-Apple Music okanye kwiSpotify.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTaylor Swift kunye ne-albhamu yakhe 'Udumo' akazukufumaneka kwiApple Music
Ubhaka we-MacBook ngenkqubo yokuhamba kabini